Daahir Gelle: Arrin aan laba sano ka hor Farmaajo ka diiday ayuu hadda wasiir Dubbe ka yeelay | Somsoon
Home WARAR Daahir Gelle: Arrin aan laba sano ka hor Farmaajo ka diiday ayuu...
Daahir Gelle: Arrin aan laba sano ka hor Farmaajo ka diiday ayuu hadda wasiir Dubbe ka yeelay
Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa shaaciyey in laba sano ka hor uu Madaxweyne Faramajo ka diiday inuu gudbiyo fariin lagu dhaleeceynayey mucaradka dowladda.
Waxa uu sheegay in taageerayaasha Farmaajo ay u yimaadeen xiligii uu wasiirka warfaafinta ahaa, isla markaana ay ku yiraahdeen faafi hadalka Madaxweynaha oo mucaaradka ku tilmaamayey siyaasiyiin xanaaqsan, balse uu ka diiday.
“Laba sano kahor, Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa mucaaradka ku sifeeyay “siyaasiyiinta xanaaqsan”. Anigoo wasiirka warfaafinta ah ayaa taageerayaashiisu iigu yimaaddeen inaan hadalkaas faafiyo. Waan ka diiday” ayuu yiri Daahir Geelle oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook-ga.
Geelle ayaa sheegay in hadda fariin – tii lamid ah loo soo dhiibay wasiirka cusub ee warfaafinta Cismaan Dubbe, isla markaana uu faafiyey.
“Hadda, wasiirka cusub ee warfaafinta, Mudane Cismaan Dubbe, ayaa loo soo dhiibay nuqulkii labaad, wuxuuna hadalkiisii ugu horreeyay ee uu fagaare ka yiraahdo ku sifeeyay mucaaradka ‘siyaasiyiin waalan” ayuu qoraalkiisa ku yiri.
Daahir Geelle ayaa is weydiiyey cidda loo soo dhiibi doono nuqulka seddaxaad ee dacaayadda ka dhanka ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee aan la dhacsaneyn siyaasadda madaxweyne Farmaajo.
“Tolow, nuqulka saddexaad muxuu noqon doonaa, yaase loo soo dhiibi doonaa?! Udub dhexaadka madaxweynenimadu waa dhaqan iyo dhawaq suubban” ayuu wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Geelle ku yiri qoraalkiisa.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ka jawaabay eedeymaha loo jeediyey madaxda dowladda federaalka ee ku aadan hanaanka ay u martay soo magacaabidda xubnaha guddiyada doorashooyinka dalka ayaa ku tilmaamay siyaasiyiin waalan.
Article horeDaawo: Odayaasha dhaqanka Hawiye oo warqad cabasho ah u gudbiyey R/Wasaare Rooble
Article socoda Hoggaanka Al-Shabaab oo ka jawaabay sheegashadii Abiy Ahmed